Saameynta tayada shaqada kulul ee caaryada wax -qabadkeeda - Aojie Mold Co., Ltd.
Saameynta tayada shaqada kulul ee caaryada wax -qabadkeeda
Tayada shaqada kulul ee caaryada ayaa saamayn weyn ku leh waxqabadka iyo nolosha adeegga caaryada. Nolosha dhabta ah iyo shaqada, aqoon -isweydaarsiga caaryada wuxuu u baahan yahay horumarin joogto ah xagga naqshadeynta iyo soo -saaridda caarrooyin kala duwan, waxaana jiri doona dhibaatooyin xagga hawlgalka gaarka ah. Waxaan ka wada hadli doonnaa oo aan isweydaarsan doonnaa dhibaatooyinka adeegsiga shaambadaha shaabadaynta leh soo -saareyaasha caaryada Shenzhen
Duminta deefinta iyo dildilaaca qaybaha shaqada ee caaryada iyo jabka hore ee habka isticmaalka dhammaantood waxay la xiriiraan habka shaqada kulul ee caaryada.
(1) Hannaanka been abuurka, oo ah iskuxir muhiim u ah hannaanka waxsoosaarka qaybaha shaqada ee dhinta. Wixii caaryada ah ee birta daawaha sare, shuruudaha farsamo ee qaab -dhismeedka biraha sida qaybinta carbide ayaa sida caadiga ah la soo hormariyaa. Intaa waxaa dheer, baaxadda heerkulka been abuurka ah waa in si adag loo xakameeyaa, qeexidda kuleylka saxda ah waa in la dejiyaa, habka xoogga been abuurka ah ee saxda ah waa in la qaataa, qaboojinta qunyar -socodka ah ama ka -hortagga waqtiga ka dambeeya been -abuurka waa in la qaataa.
(2) U diyaargarow daaweynta kulaylka. Marka loo eego agabyada kala duwan iyo shuruudaha qaybaha shaqada ee dhimanaya, hababka daaweynta kuleylka ee hore sida daboolidda, caadiyeynta ama dejinta iyo xanaaqa waa in la qaataa si loo hagaajiyo microstructure -ka, loo tirtiro cilladaha microstructure -ka ee been abuurka ah iyo hagaajinta farsamaynta farsamaynta. Ka dib marka si habboon loo daweeyo kulaylka, sibidhka labaad ee shabakadda ama carbide silsilad waa la tirtiri karaa, carbide -ka waa la is -beddeli karaa oo waa la sifeyn karaa, iyo midaynta qaybinta carbide -ka ayaa kor loo qaadi karaa. Sidan, tayada daminta iyo dabaysha ayaa la dammaanad qaadi karaa oo nolosha adeegga dhimashadu waa la hagaajin karaa.
(3) Bakhtiinta iyo xanaaqa. Kani waa iskuxirka furaha ee daaweynta kulaylka ee caaryada. Haddii kulaylku dhaco inta la deminaayo oo la kululaynayo, shaqadu ma aha oo kaliya inay keento jajab badan, laakiin sidoo kale waxay si fudud u sababi kartaa isbeddel iyo dildilaac inta lagu jiro qaboojinta, taas oo si weyn u saamayn doonta nolosha adeegga dhimashada. Inta la deminaayo oo la kululaynayo geerida, waa in fiiro gaar ah la siiyaa si looga hortago oksaydhka iyo qallajinta. Qeexitaanka habka kulaylka waa in si adag loo xakameeyo. Haddii xaaladuhu oggolaadaan, daaweynta kulaylka faaruq ayaa la isticmaali karaa. Marka la demiyo ka dib, waa in la hagaajiyaa waqtiga, iyo hababka kala -soocidda kala duwan waa in la qaataa sida waafaqsan shuruudaha farsamada.
(4) Kordhinta kadeedka cadaadiska. Qaybaha shaqada ee dhinta waa in lagu daaweeyaa dabcinta kadeedka cadaadiska ka dib marka la farsameeyo si adag si loo tirtiro walbahaarka gudaha ee ay sababaan mashiinnada qallafsan, si looga fogaado isbadal xad -dhaaf ah iyo dildilaacyo ay keento demin. Wixii caaryada leh saxnaan sare, daaweynta dabaysha dabcinta cadaadiska ayaa loo baahan yahay ka dib shiidi ama mashiinnada korantada, taas oo ku habboon xasilinta saxnaanta caaryada iyo hagaajinta nolosha adeegga.